Apple Music, mimhanzi yako yese munzvimbo imwechete - # WWDC15 | Yakafananidzwa | Ndinobva mac
Yakafananidzwa | | Apple Music, Noticias
apuro yaziviswa nhasi Apple Music, intuitive app inosanganisa nzira dzakanakisa dzekunakidzwa nemumhanzi, ese akaungana munzvimbo imwechete.
1 Apple Music iri pano. Dzese nzira dzekunakidzwa nemumhanzi. Vakaungana panzvimbo imwechete
1.3 Apple Music Batanidza
1.4 Mitengo uye kuwanikwa
Apple Music iri pano. Dzese nzira dzekunakidzwa nemumhanzi. Vakaungana panzvimbo imwechete
Apple Music ndeye inochinja mimhanzi yekushambadzira sevhisiApple yekupayona yepasirose inorarama chiteshi cheredhiyo ine 24-awa programming uye yakanaka nyowani nyowani yevateveri vemimhanzi kuti vabatane nevavanoda maartist. Apple Music inosanganisa hombe uye yakakwana mimhanzi muunganidzwa papasi pamwe neruzivo rwevanyanzvi nyanzvi mumunda, avo vakaronga runyorwa rweiyo iPhone, iPad, iPod touch, Mac, PC, Apple TV uye Android mafoni (*). Apple Music ichave iripo kutanga muna Chikumi 30 mune dzinopfuura nyika zana.
Tinoda mimhanzi, uye nebasa idzva reApple Music vese vateveri vane chiitiko chinoshamisa pamunwe wavo.akadaro Eddy Cue, mutevedzeri mukuru weApple weInternet Software neMabasa. Dzese nzira dzekunakidzwa nemumhanzi dzinounzwa pamwechete muapp imwechete, ichipa shanduko yekushambadzira sevhisi, redhiyo yepasirose yepasi, uye svikiro rinonakidza revateveri kuti vabatanidzwe nemaartist.
Apple Music ichave shanduko hombe kune vateveri uye maartistJimmy Iovine akadaro. Mumhanzi wepamhepo wave wakashatisa zvakanyanya maapp, masevhisi uye mawebhusaiti. Apple Music inounza pamwe akanakisa maficha ekupa vese vanoda mimhanzi chiitiko chinoshamisa.
Apple Music ishanduko yekushambadzira sevhisi uye app inoisa iyo yakazara katarogu ye Apple Music pazvigunwe zvemushandisi pazvinhu zvavo zvavanofarira. Kutanga nemumhanzi waunotoziva - kungave kubva kuTunes Store kana kubva kumaCD ako - izvozvi disco yake yakaunganidzwa pamwechete neApple Music katarogu, iyo inosanganisira zvinopfuura 30 miriyoni nziyo. Mushandisi anogona kutenderera chero rwiyo, dambarefu kana playlist. Kana zvirinani zvakadaro, unogona kurega Apple Music uzviitire iye.
Zvose Apple Music Playlists vane chinhu chimwe vakafanana: ivo vakasarudzika kwazvo. Apple yakahaya nyanzvi dzemimhanzi dzenyika kuti vaise pamwechete runyorwa rwakakwana zvichienderana nezvinodiwa nemushandisi, uye mhedzisiro inoramba ichiita zvirinani sezvo mimhanzi yakawanda inoridzwa. Iyo "Yewe" chikamu cheApple Music inopa musanganiswa unozorodza wemaarubhamu, zvitsva zvinoburitswa, uye zvinyorwa zvekutamba, zvese zvakagadzirirwa mumwe nemumwe mushandisi.
Pamusoro pekusarudzwa kwevanhu, Siri inobatsirawo kunakidzwa nenziyo dzakanakisisa uye unakirwe neApple Music. Siri anogona kuudzwa kuti aridze nziyo dzakanakisa dza1994, rwiyo rwakanakisa rwematavi eFKA, kana nhamba 1 muna Kukadzi 2011.
Inorova 1Chiteshi cheredhiyo chekutanga cheApple chakatsaurirwa chete kumimhanzi netsika yacho, ichatepfenyura mhenyu kune dzinopfuura nyika zana. Beats 100 inopa isina kuvhiringidzwa redhiyo chiitiko kubva kune vane mukurumbira maDJ Zane Lowe anobva kuLos Angeles, Ebro Darden anobva kuNew York naJulie Adenuga anobva kuLondon. Vateereri kutenderera pasirese vachanzwa zvakafanana mhando chirongwa panguva imwe chete. Zvinonakidza Beats 1 zvinoratidzira zvinosanganisira chete mabvunzurudzo, vashanyi, uye akanakisa emimhanzi yazvino.
Apple yakashandurawo kusarudzwa kwevanhu kuti vagadzirise redhiyo. Apple Music Radio inopa nhepfenyuro dzakagadzirwa nedzimwe dzakanakisa redhiyo DJs munyika. Nhepfenyuro nyowani dzinosanganisira dzakasiyana siyana dzemhando, senge indie dombo, yechinyakare, yechinyakare uye yefunk, ese akasarudzwa nehunyanzvi hukuru. Nhengo dzinogona kusvetuka nzira dzese dzavanoda, saka havafanirwe kubata dial kuti vachinje nziyo.
Apple Music Batanidza
Artists uye mafeni ikozvino vane inoshamisa nzira yekudyidzana yakanangana nayo Apple Music game batanidza. Nebasa iri, maartist anogona kugovana rwiyo, backstage mafoto, mavhidhiyo, kana kutoburitsa yavo yazvino rwiyo akananga kune vateveri kubva ku iPhone yako. Fans vanogona kutaura kana kufarira chero chinyorwa posvo, uye kuchigovana neMameseji, Facebook, Twitter, kana email. Uye kana mushandisi akataura pane chimwe chinhu, muimbi anogona kuvapindura zvakananga.
As of 30 yeJunevateveri vemimhanzi kutenderera pasirese vachakwanisa kunakidzwa vakasununguka chebasa iri kwemwedzi makumi maviri nemana, uye ipapo mari yekunyorera ichave $ 9,99 pamwedzi kuUS. Zvakare pachava nehurongwa hwemhuri yevashandisi vanosvika vatanhatu, inowanikwa chete 14,99 madhora pamwedzi muUS.
Kutanga kunyoresa kunodiwa. Pakupera kwenguva yekutongwa, kunyoreswa kunozomutsiridza uye nzira yekubhadhara ichabhadharwa pamwedzi wega wega kusvikira iyo yekuvandudza otomatiki yabviswa muzvirongwa zveakaundi. Urongwa hwemhuri hunoda iCloud Kugovana Kwemhuri. Mamwe mashoko anogona kuwanikwa pa www.magariro.com/es/icloud/family-sharing.
* Apple Music Ichave iripo yeiyo iPhone, iPad, iPod touch, Mac uye PC kutanga June 30. Apple Music iri kuuya Apple TV uye Android mafoni aya kudonha.
SOURCE | disc. Apple Press
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music, mimhanzi yako yese munzvimbo imwechete - # WWDC15